Xorriyadda Doorashada | Laga soo bilaabo Linux
phico | | Kuwa kale
Saaxiibbo waad salaaman tihiin !. Waxaan u socday inaan faallo ka bixiyo maqaalka «Jahwareerka awooda doorashada«, Laakiin waxaan doorbidaa inaan qoro qoraal, maxaa yeelay waxaan tixgeliyaa mawduuca ahmiyadda ugu weyn leh. Nasiib darrose, waa inaan in yar ka hadlaa - nasiib wanaagse wax badan - naftayda.
Waxaan ahay nin duug ah oo Fashion ah waxaan hubaa inaan ka mid ahay duqowda ugu badan ee soo booqda Fromlinux. Waxaan ku bilaabay, sida kuwa badan, 1990-kii MSDOS 3.0. Ma jirin saaxiibkay waqtigaas oo ka hadlaya "Doorashada" nidaamka qalliinka, maaddaama "kan kale" uu ahaa UNIX. Waxaan kuu xaqiijin karaa adigoon ka baqayn inaad khalad noqoto, oo aad aragtid aragtida, in "Xitaa kama aanan fikirin inaan dooranno nidaam kale oo hawlgal." Waxay ahayd MSDOS iyo in ka badan, sidaan ku leenahay Cuba.
Kadibna waxaa yimid noocyada 4 (si dhib leh qofna uma adeegsan); 5 iyo 6. Si lama filaan ah Windows 3.0 ayaa ka dhex muuqday fagaaraha. Kumaanaan fikirin inaan mid kale doorano. Marka taasi waxay ahayd riyo dhab ah in laga fikiro in kombiyuutar guriga lagu haysto. Waxaan marin uga helnay goobta shaqada. Dabcan, shirkadaha qaar way ka awood badnaayeen kuwa kale arintaas.
Kadibna waxaan helnay Windows 3.1. Ahhh, sidee layaab leh !!! Oo wali kamaanaan fikirin nidaamka kale ee "operating" taas aan ahayn. Hadda kahorba, waxaa jiray "toos iyo toos toos ah" oo inta badan ku saabsan luuqadaha barnaamijka, tifaftireyaasha qoraalka, xaashiyaha, iyo yutiilitida ama faylalka faylalka.
Waqtigu waa dhaafay ilaa noocyada cusub ee Windows 95 (Versions A, B, C, SR2, iwm) ay soo gaareen xeebaheena. Wali maanaan haysan awood xulasho. Kama aanan fikirin taas. Laga yaabee, inaad joogtay 3.1 ama 3.0 ama MSDOS, laakiin dhammaantood waxay ahaayeen Microsoft. Waana isku mid markii Windows 98 iyo noocyadiisa ay soo baxeen.
Qaarkeen, sidaan oo kale, waxay bilaabeen adeegsiga NT 4.0 ee server-yada, laakiin xarumaheena ganacsi waxay ahayd caqabad in la rakibo, maadaama darawallada ay ku yaraayeen qalabka aan haysanay. Waxay ahayd Odyssey Dhameystiran si loo sameeyo NT 4.0. qalab kasta oo aan summad lahayn.
Markii aan ku siiyay hal shaashad oo buluug ah ... inaad dib u bilowdo. Mararka qaarkood in ka badan 4 ama 5 isku day, maxaa yeelay xitaa amarka rakibidda wadayaasha ayaa saameyn ku yeeshay. Xitaa sidaa iyo dhammaanba, maadaama aynaan dooran karin "mid kale" -UNIX weli erey xun buu noo ahaa, "Saynisyahannada Kombuyuutarrada A ... Xoogga" -. Haddii aan ku rakibeyno adeege, waxaad rakibtay NT 4.0 ama waxaad raadineysay qalab isku habboon. WAANA ISKU QAADNAY IN XAALADU SAMAYSAN CAADI OO AANAN CABANAYN, WAALAN !!!.
Waxaan ku dhibtoonnay inaan rakibno Nt barakaysan. Xoog, maya? Aragti ahaan waxaan arkaa inaynaan fursado haysan. Waxay ahayd Nt ama Nt. Microsoft ama Microsoft. Windows ama Windows.
Miyaad qiyaasi kartaa IN LA AQOONSADO DHEERAAD AH, aan ku soo marnay waaya-aragnimadan jahwareerka leh marar badan? Laga soo bilaabo tallaalka waxaan noqday "khabiir" rakibaadda Nt 4.0, aad iyo aad u badan, xilligii runta ee Windows XP, maaddaama mashiinkeygii ugu horreeyay gaar ahaa Pentium III oo leh 512 megabyte oo RAM ah iyo kaarka fiidiyowga ee NVidia oo leh 32 megabyte oo RAM ah. Waxaan ku rakibay Nt 4.0 deluxe, maadaama guddiga iyo kaarka ay wadeen darawallada. Kooxdii yarayd waxay la duuleen Nt-kooda, aniguna aad baan ugu hanweynahay oo waxaan baray asxaabta sida loo ciyaaro ciyaar la mid ah Qiyaamada. Mudanayaal, tani waxay dhacday qiyaastii 2002.
Manzana?. Qalabkaas + software-ka-iyo-jeexdin waxaa iibsaday in yar oo runtii ah - shirkado waddankeyga ah waxaanan arkay markii dambe oo ka shaqeynaya oo keliya 3 kombuyuutar meelo kala duwan.
Kadib waxaa yimid taxanaha Windows 2000, oo Microsoft, ay la kulantay xaqiiqda ah in shirkado badan oo horey u soo jeestay axdiga cusub aysan "u guurin" ilaa 2000, gaar ahaan sababo dhaqaale, waxay ka bilaabeen Spain nooc 2000 Dahab ah, iyadoo loo maleynayo " Tijaabada 90 maalmood ", markay run ahaantii si buuxda u shaqeynaysay si aan xad lahayn. Haddii aadan "bixin" 2000-kaaga, shirkado yar ayaa bilaabi lahaa adeegsiga 2000.
Kadib waxaa yimid Windows Millennium. Ma ogeyd isaga? Marnaba ma isticmaalin.
Markaas waa taariikh dhow. XP wuxuu u yimid inuu ku fadhiisto carshiga sanado badan, laanta Server-ka 2003 server.
Ilaa imaatinka Vista, isticmaalayaasha badankood runtii way ku qanacsanaayeen XP. Waxaan la nooleynay shaashadaha buluuga ah ee dhimashada; adoo ku rakibaya OUR Xp markasta; u jabso marar badan; ku rakibo antibiyootiko ama la'aan; live ku sugaya cusbooneysiinta; aadna u adeegsada. Xitaa fursadaha waxay ka badnaayeen 90% gudaha Microsoft. Kama baxsan kartid cagahaaga oo aad ka saarto dhulka Microsoft.
Marka, dib ugu noqoshada 2006, Vista ayaa la timid. Waxaan arkay dad badan oo rakibay oo u jeesanaya dhanka Xp xawaaraha gantaalada hawada sare. Waxaan arkay dad badan oo isku dayay Ubuntu 6.06. Qaarkood way joogeen, qaar kalena waxay ku noqdeen Xp. Mar kasta oo aan akhriyo joornaal, 90% ka mid ah qodobbadu waxay ahaayeen "inay i iibiyaan" Vista. Waana markii aan ku daalay kharash garaynta.
Wuxuu horeyba "ula ciyaaray" Suse, Mandrake, iyo Red Hat. Iyaga dhexdooda waxaan u xiisay Xafiiska wixii ka sarreeya wixii kale iyo barnaamijkayga Visual FoxPro 6.0. Haa, wuxuu ahaa barnaamij-sameeye xog-ururin. Waxaan ku haystay Suse hal darawal oo adag iyo Xp mid kale. Laakiin wax kale ma isticmaalin Xp.
Waxaan bilaabay inaan helo ikhtiyaarro. Waan awalba dooran kari lahaa, nacalaa !!!
Bishii Luulyo 1, 2006, aniga oo kaashanaya saaxiibkay "El Freake" Julito Cesar, oo isoo baray Messrs. Suse iyo kuwa kale, waxaan ku rakibay nidaamka KALIYA ee ka hawlgala badeecadayda cusub ee Pentium III oo leh 1 gigabyte oo RAM ah, Old Debian 3.0 "Sarge".
Waxaan si xor ah u doortey markii aan heley ikhtiyaar dhab ah oo wax ku ool ah oo aan sidaas ku sameyn karo. Jidka ayaan ku doortay sir badan.
Laba maalmood ka dib waxaan ku dhawaaqay in "qalabkeygu uusan waligood arki doonin Windows-ka", waana ay jirtay waana jiri doontaa inta Linux jirto. Maalin kasta waxaan hubaa in yar oo Windows ah. Dabcan, Debian ahaan wanaagsan, waxaan isku dayay Ubuntus 6.06, 7.10, 8.04, 10.04 iyo 11, markasta oo aan dhaqso ugu laabto My Old Debian. Hadda waxaan kaliya u isticmaalaa Tuuji ama Wheeze xulashadayda xorta ah ee ka jirta xarumgeyga shaqada. Waxaan hayaa xafiisyo leh Etch, Lenny iyo Tuujinta.
Waxaan u isticmaalaa Debian xulasho inkasta oo ay jiraan tiro aad u fara badan oo meesha taal. Waan ku qanacsanahay Debian. Dunida Debian ayaa igu habboon aniga.
Hadda, waa maxay sababta Linux badan u dishay? Ma aha sababta oo ah waxa tartiib tartiib loo fulinayo in "qof kastaa samayn karo Linux shaqsiyadeed"? Maxaa layaab leh, sax? Mise waxaa wanaagsan in lagu sii noolaado keymaha hal geed? Kuweena door bidaya Linux miyay ku qasban yihiin inay farxad ku noolaadaan sida kuwa aan arag wax sankooda dhaafsanayn, sida heesta Cuba ay leedahay?
* Immisa nooc oo baabuur ah ayaa jira?
* Immisa maqaaxiyo ayaa ku yaal magaalada Mexico City, ama Buenos Aires ama Madrid?
* Imisa boqol oo haween ah ayaan haynaa marka aan dooranayno lammaanahayada?
* Iyo nus milyan su'aalo dheeraad ah oo ku saabsan Imisa… ayaa jira… ma jiraan…?
"Awoodda Xulshadu waa mid laf-dhabar u ah Nolosha lafteeda." Gaboodfalka noloshu waxay noqon doontaa in la ilaaliyo kala dambeynta waxyaabaha sidii markii aan adeegsan lahayn Microsoft oo keliya. Marka ha igu sii dheellitirin iliga indhaha isku dhaafsan ee jahwareerka markaad dooraneyso, sida ay ku yiraahdeen Buen Cubano, oo macnaheedu yahay "Ha igu sii darin hadalkaas qalafsan ee wareerka ah markaad dooraneyso." 🙂
Qaab dhismeedka Linux distros waa arboreal hadaad sifiican ufiiriso. Haddii adiga, saaxiibkay, xoogaa lagaa lumayo markay tahay doorashadaada, dooro geedaha xididka: Debian, Red Hat, Slackware, iyo in yar oo kale. Iyagu waa "Classics" in loogu yeedho haddii kale. Iyagu waa "Odayaashii" weli nool oo caafimaad qaba, oo soo saaray farac caafimaad qaba oo tiro badan. Haddii kale, booqo boggaga bixiya tan ugu badan ee la isticmaalo bil kasta iyo sanadkiiba oo dooro midkood. Hadaanay ahayn, ku dhiiro gal oo samee adigu.
Haddii kale, booqo FreeBSD ama goob kale oo BSD ah oo xulo. Ogsoonow inaan ku siiyay fursado yar oo bilow ah. Haddii kale, waxaan qabaa inaad waqtigaaga ku lumineyso akhrinta maqaalkan oo aad isticmaaleyso Windows ama Apple. Dhinaca kale, Android, Nokia, Black Berry, iyo waan ogahay inta nooc oo kale, iyo ku dhowaad dhammaan adduunka cusub ee aaladaha taleefannada yar-yar ee badan ee horay u jiray, waxay Linux ku hayaan calooshooda.
Qofna kuma lumi karo keynta Linux haddii, markii shaki ku jiro, ay dib ugu noqdaan geedaha xididka! Wadooyinka si aad u wanaagsan ayaa loo dhigay. Barnaamijka softiweerku, sida hal-abuurka kale ee aadanaha, kuma cusba fikirka guud.
Iyo dhamaan kiisaska aad dooratay, saaxiib, aad u farax oo cun digaag inta ka hartay.
Yaan geed qudha naga reebin inaannu aragno kaynta!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Kuwa kale » Xorriyadda Doorashada
Waxaan ku bilaabay ZX81 si aad u yar ama ka yar oo isku mid ah, 1994-kii waxaan bilaabay inaan isa siiyo keega Slackware! iyo kaarka sawir gacmeedka ident. ilaa 1996 ma rakibeyn karo Linux ...
ma dhigin sawirka kaynta…. halkaas ayaad ku haysataa:
waa wax aad u xiiso badan in la qabsado waxyaabaha loo yaqaan 'distros' oo lagu arko Vbox…. hadda waxaan arkayaa qaar SID-yada debian-ka ah ee horay loo kariyey oo layaableh. Rakiibihii midkood baa i qarxiyay ... Waxaan u maleynayaa kii Talyaaniga ... HAA
Qoraal cajiib ah, anigu kuma duugoobin sidaada oo kale laakiin waxaan qaaday hawsha ah tijaabinta isbeddelka nidaamyada microsoft ee rakibidda 3.11 oo leh 14 diskette-keeda illaa waxa ay tahay maanta, isla markaana ku jirta Linux, waxaan xusuustaa slackware-kii ugu horreeyay ee 6 distro ... Maalmahaas lol waxay igu qaadatay toddobaad in aan ogaado in ay ahayd in aan isticmaalo "startx" si aan ugu socodsiiyo deegaanka garaafka ah iyo in aan si fiican u rakibay, dabcan wax xiriir ah oo aan la lahaa waqtigaas ma jirin si aan u raadiyo wax uu
Qoraal wanaagsan. Farxad
Maqaal aad u xiiso badan, waxaan soo marnay wadooyin isku mid ah, waxaan bilaabay malaha dhowr sano ka dib. Arrintaan marwalba waxaan qabay dareenno isku dhafan, hal dhinac waxaan garwaaqsanayaa suurtagal la'aanta in albaabada loo furo garoonka, in aan noqdo softiweer bilaash ah waxay ka dhigan tahay in qof kastaa abuuri karo qaybsi cusub si loogu daro liiska aadka u dheer ee kuwa jira. Laakiin dhinaca kale waxaan sidoo kale ku raacsanahay in codsiyada tayada leh ay maqan yihiin oo ay jiraan miisasyo badan iyo qaybinta, marka lagu daro wadaagista, maxaa yeelay waxaan ku noolaa jidhkayga, aragtida ah in tirada badan ee xulashooyinku ay sababaan xoogaa curyaannimo iyo qanacsanaan la'aan waxay u timaaddaa in la doorto.
Taasi waa sababta aan ugu arko waxtarkaagu mid aad u xiiso badan, gaar ahaan hal dhinac: xulashada qaybinta "jir" waxay yaraynaysaa xulashooyinka oo laga yaabee inay ka caawiso go'aan la'aanta weligeed ah in la doorto. Sababta oo ah, waxaan u leeyahay anigoo og, inaan la helin nidaam go'an waxay noqon kartaa daal, jir ahaan iyo maskax ahaanba, kuwa aan u sameynin madadaalo.
Waad ku mahadsantahay faallooyinka !!! Aniga ahaan waa wax aad ii walaac badan in la beddelo qaybinta, xitaa jawiga desktop-ka. Taasi waa sababta aan ugu talinayo in laga bilaabo Root. Haddii aad mar dambe rabto inaad fuulo laamaha, hambalyo sidoo kale. Laakiin ka bilow asalka, gaar ahaan haddii ay si aad u wanaagsan u shaqeyso, oo ay leedahay sannadaha ugu badan ee waayo-aragnimo shaqo. Khibradda lama dhayalsan karo.
Si wanaagsan ayaa loo dhahay, waxaan ku raacsanahay fariinta ugu weyn ee boostada. Waxaan u maleynayaa inay tahay inaad raadiso wax kaa dhigaya mid wax soo saar leh oo aanad waqti ku lumin isku day kasta oo distoor ah oo kugu soo dhaca marka aynaan wakhti u helin.
Waxaan ku bilaabay Slax (maxaa yeelay ma aanan haysan kumbuyuutar aniga ii gaar ah), markaa waxay wada ahayd Slackware. Xasiloonida iyo caajisnimada Slackware (oo leh KDE markaa waqti igagama lumiyo dejinta muuqaalada iyo faahfaahin kale), taasi waxay i siisaa waqti aan runtii ku shaqeeyo. Dhowr bilood xiisaha aan u qabo darteed waxaan isku dayay Arch, Chakra iyo Ububtu, laakiin wax walba ayay noqdeen.
Salaan iyo Nooloow xorriyadda doorashada!
Qoraalku aad ayuu u wanaagsan yahay, in kastoo aanan u dhibsan sidaada oo kale, waa run in, sabab kasta ha noqotee, ay jiraan gnu.linux badan, waana musiibo.
waxaad haysataa wax badan oo aad ka doorato, laakiin dhexdeeda ayay ku taal musiibada. Waa wax la mid ah "macluumaadka xad-dhaafka ah, wuxuu dhaliyaa faaf-reeb"
laakiin haye, waxyaabo badan ayaa qaraabo ah….
Ku jawaab Kakashi
Waxaan u maleynayaa in qotada dheer dhammaantood ay isku mid yihiin, runta ayaa ah in aysan dhib igu ahayn inaan ka wareego mid ka mid ah distoorka una wareego mid kale, ugu yaraan jawiga desktop waxaad mar walba leedahay barnaamijyo isku mid ah. Ka beddelka hal durdur oo u beddelaya mid kale macnaheedu maahan dhibaato badan.
Maqaal / faalo aad u wanaagsan laakiin runtu waxay tahay waxaan garanayay Linux ilaa iyo in ka yar ama ka yar 1998, oo ah markii aan galay jaamacadda oo aan had iyo jeer aad ula dhacsanaa Unix, odaygaygu wuxuu ahaa qof adeegsada, waxaan wali xasuustaa soddonkiisii ​​... ama xitaa afartan ... saxan dabacsan oo lahaa rakibayo nidaamka afar oo aan markii dambe dhaxlay, dabcan waxaa laygu yeeray wax badan oo Minix iyo Linux ah, marka la soo koobo, quruxda haysashada noocyo badan intaas kaliya maahan laakiin sidoo kale taasi sidoo kale waxaad haysataa Linux on router, NAS iyo nidaamyo kale oo badan oo gundhig ah Kuwaas oo aad wali dooran karto, taasi waa quruxda, inaadan kaliya ku maamuli karin qunsuliyada laakiin sidoo kale iskudhafka garaafka, SSH ama webka, aad u xun markaad sameysid cusbooneysiinta cadaabta, waa waxa kaliya ee aniga i dhiba, salaan.
Haddii aad ka isticmaasho qalabka noocyada kala ah NVIDIA, ATI / AMD iyo / ama Broadcom, sida iska cad inta badan distros-ku waxay ku dhacayaan cusbooneysiinta guud ee ugu horreysa; laakiin haddii aad isticmaasho 100% Intel-yada waaweyn ee loo yaqaan 'Altheros chipset', waad fiicnaan kartaa (haddii aadan isticmaalin mediocre distros sida Ubuntu, oo ku dhacda cusbooneysiinta guud ee ugu horreysa).
Wax dhibaato ah kuma qabo Debian Stable PC-ga, maaddaama nidaamkeeda "apt-get" loo habeeyay si aan uga cusbooneysiin karo xarkaha adigoon taabanin faylashaada ama kaa hor istaagin inaad gasho feylashaada.
waa run toshibaheygii hore oo leh amd 64 × 2, oo leh qaar ka mid ah waxyaabaha loo yaqaan 'disrosros' ayaa daalay.
Fariin wanaagsan, in kasta oo aanan u adkeyn sida kiiskaaga oo kale, laakiin waxaan ku raacsanahay Vista, waxay qaadatay 3 bilood kombuyuutarkayga hadda waxaan ku noqday XP halka aan ku lahaa qayb kale oo Ubuntu ah, oo aan aad u isticmaali jiray badanaa, marka laga reebo Ciyaaraha (sidaas darteed kuwa aan ugu jeclahay (midna kama uusan shaqeyn Khamriga) waxaana horeyba u ahaa 3 sano oo aan lahayn XP-ka marka laga reebo Virtualbox haddii ay dhacdo in maalin uun ay dhacdo inaan qaado barnaamij yar oo aniga ah Python.
Xulashadu waa wax cajiib ah, laakiin markay timaado GNU / Linux, waxay leedahay faa'iidooyinkeeda iyo waxyeellooyinkeeda.
Waqti ka hor, anigoo milicsanaya mowduuca, waxaan daabacay qoraal cinwaankiisu ahaa: «Kala duwanaanta barnaamijyada bilaashka ah». In kasta oo ay aad u gaaban tahay, waxaan doorbidaa inaan ka tago xiriiriyaha haddii ay dhacdo inaad adiga xiiseyso.
Dhamaantiin waad ku mahadsan tihiin faallooyinkiina.
Waxaad arki kartaa in iniintii ay miro dhaleen.
Hagaag midkoodna maan rafaadin sidaaduba laakiin waxaan kuu sheegi karaa garka taariikhdayda adduunka sayniska kombiyuutarka.
Tan iyo markii aan jiray 10 sano, haddii aan si sax ah u xasuusto, waxaan isticmaali jiray daaqadaha laakiin waxa dhaca oo kaliya mid ayaa raba daaqado iyo daaqado badan inta noocyada cusub ee daaqadaha ay soo socdaan, mid ayaa aad ula dhacay, marka hore waxaan ku bilaabay windows vista ka dibna XP ka dibna daaqadaha 7 illaa aan ka hadhay.
Kadib waxaan Linux ku arkay kumbuyuutarka walaalkay waana jeclahay nidaamkaas qalliinka waxaanan bilaabay isticmaalka Linux illaa iyo hadda bilowgii aad bay u adkayd inaan go'aan ka gaaro inta u qaybinta badan ee jirtay sidaa darteed waxaan isku dayay qaar ilaa aan ka jeclahay mid ah Ubuntu. ilaa maanta waxaan isticmaalaa Linux.-
Markii aan isticmaalay diro badan waxaan go'aansaday wax xasiloon, waa markii aan bilaabay isticmaalka Debian markale nuqulkan Wheezy ayaa iga yaabiyey.
Waxaan si badbaado leh u dhihi karaa waxaan horey uhelay distoorkeygii ugu dambeeyay.
Waan isticmaali jiray tan iyo markii uu soo baxay nooca 5.0 (Lenny, inuu sax ahaado). Sida iska cad, Wheezy waa wiish waji buuxa leh maxaa yeelay tayadiisu gabi ahaanba way ka sareeysaa, sidoo kale waxaa ku jira codsiyada si isticmaaleyaasha cusub ay ugu raaxaystaan ​​distoorkan.
Qoraal qurux badan.
Ugu dambeyntiina waa iftiinka sirdoonka ee mugdiga cilmiga farsamada ee aan ku nool nahay halkaasoo qof walba uu aaminsan yahay inay awood u leeyihiin fikradaha saxda ah.
Shareando boostada dhamaan shabakada 😉
Xaqiiqdii, ugufiican qoraalada laxiriira doorashada GNU / Linux distros. Waxaan ku bilaabay Mandrake 9 waxaanan ku sii waday Debian 5, oo sida muuqata aan u cusboonaysiiyay qaybta 7 aadna aad ayaan ugu faraxsanahay go'aankayga.
Waxaa la doorbidaa in la doorto "matrix" distros ka hor inta aan laga shalaayin go'aan xun. Intaas ayaan ku dhahayaa wax walba.
Waxaan kubilaabay XP in waxwalba waa in ladhahaa waa cajiib .. laakiin dabcan .. Waan ogaa in nidaamyada Linux ay wareegayaan ... laakiin waxaan ka baqay inaan isku dayo oo waxbaa jabaya ... sidee nacasnimo ah ... ilaa sanado badan .. Waxaan go aansaday inaan iskudayo LIVE ubuntu ... oo waxaan isdhaafsaday faraha ... si loo rakibo ...
Waan wada rakibey xp indhahayguna way kala furmeen ..
Ugu dambayntii xor baan ahaan karaa ... hadda waxaan isticmaalaa ubuntu ama Linux lint ... laakiin haddii ay tahay inaan cusboonaysiiyo taleefanka ... Waa inaan isticmaalaa win7.
PS lamaanahayga ... kan isticmaalay win7 waxaan saaray lint mint ... aad umay qancin ... hadana way igu mahadsantahay maalinwalba markaan saaray.
Ku jawaab templario29
Maqaal aad u fiican lamaanahayga Freeke waadna ku mahadsan tahay inaad magacayga ku xushay hal cod oo dheeraad ah oo ku saabsan xorriyadda doorashada
Waad ku mahadsan tahay adiga, El Freake !!!
mahadsanid Vista waxaan bartay Linux xD
Xitaa waan nahay, xitaa haddii aan sii adeegsado, waxaan bartay inaan xakameeyo noocaan Windows-ka ah (si kastaba ha noqotee, wax badan ugama duwna Windows 7, oo u muuqda inuu isku mid yahay xagga waxqabadka)
Sikastaba, Thanks Vista waxaan bartay Debian.
Xaqiiqdii, waxaan ku haystaa kombuyutarkayga Vista SP2 si aan uga fogaado cusbooneysiinta Windows 7. Ugu dambeyntiina, waxay la mid tahay Windows 7, kaliya waa wax aad u xanaaq badan oo ku saabsan rukhsadaha iyo AMD's waa wax laga yaqyaqsado oo dhab ah.
Hagaag, xaalad kastoo jirta waxaa jira distros i isiisay madax xanuun badan ama ka badan tan Vista sidaa darteed sida blogger uu kor ku sheegay waxaa fiican in la isticmaalo kaliya distros-ka weyn (waxaana kugula talin lahaa inaadan isticmaalin sii deynta, khibradeyda)
Xitaa Arch ha ii xusin, waa mid gacanta ku haya oo aad ii xiira.
Sikastaba, waxaan doorbidayaa distros sida Slackware iyo Debian (waxaan lajoogey Debian iyo Slackware, si dhib ah kuma isticmaalo kumbuyuutarrada kumbuyuutarka ah).
In kasta oo aanan u ahayn sidii hore ee saaxiibkay ah, haddana waxaan dhihi karaa sheekadaydu waxay aad ugu egtahay qoraaga.
Laga soo bilaabo yaraanteydii waxaan aad u xiiseynayay adduunka xisaabinta iyo teknolojiyadda macluumaadka, maadaama aan bilaabay inaan isticmaalo Windows 95 iyo Windows 3.11, tan iyo markii adeeggii ugu horreeyay ee aan ka sameeyay ay ahaayeen ciyaarihii xilligaas sida Mario Bros. iyo Prince reer Faaris. Ka dib waxaan soo maray Windows 98 oo aan la socdo Office 97/2000 oo ku jira dugsiga sare, runtiina waxay tahay in aan aad ugu soo jiitay OSX marka loo eego Windows-ka, maaddaama ay taasi ahayd nidaamka hawlgalka ee wax badan uga muuqday filimada Mareykanka. Waan awooday inaan isticmaalo Windows ME / 2000, laakiin waxay qabteen dareenkeyga maxaa yeelay dhaqdhaqaaqa calaamaduhu wuxuu kudhowaad ahaa 30 FPS marka loo eego 24 FPS ee ay ku muujisay Windows 3.11 / 95/98.
Imaatinka Windows XP, waagii dahabiga ahaa ee Microsoft ayaa bilaabmay, waxay ahayd waqti aad u dheer markii aan ku guulaystay inaan haysto PC ii gaar ah (wuxuu ahaa Pentium II oo wata Windows 98, halka kuwa kale ay la shaqaynayeen Pentium 4, waxay i siisay wakhti igu filan oo aan ku baadho si qoto dheer nidaamka Microsoft) oo waxaan u suurtagashay in aan akhriyo xusuustayda USB; Waxaan kaliya isku dayay dariiqa ugu horreeya ee GNU / Linux: Mandrake 9, oo aan ku nici lahaa gaabiskiisa. Sannadkii 2008, waxaan hadda bartay Windows Vista iyo Office 2007, maaddaama machadka aan wax ka baranayay uu ku rakibnaa software-kaas. Waan jeclaa farshaxanka Windows Aero, laakiin waan necbahay waxqabadka kernel (waagaas, waxay lahaayeen RTM oo waxaa jiray xawaare intarneed oo intarneed oo ku filan oo lagu rakibo SP1 dushiisa halkaasna waxaan ku kulmay Debian Lenny, oo aniga iga codsatay fudeydkeeda awgeed) GNOME 2 iyo Iceweasel).
Bartamihii-2010, markii aan ahaa ardayga akadeemiyadda jaamacadda kahor, waxaan xiiseynayay inaan isku dayo Ubuntu, oo ah GNU / Linux distro oo dhammaan kombiyuutarada lagu rakibay. Waqtigaas, Ubuntu wuu fiicnaa, laakiin si tartiib tartiib ah ayuu u xumaaday tayada wax soo saarkeeda .deb xirmooyinka taas oo iga dhigtay inaan dib ugu noqdo Debian.
In kasta oo aan wax ka sheego inta badan Windows, laakiin waa nasiib daro waddanka aan ku noolahay adeegsiga softiweerka lahaanshaha (CorelDRAW, Photoshop, Flash) aad ayuu u xididoobay, ka sokow taas waxaan badanaa isku dayaa dekadaha barnaamijyada GNU / Linux ee Windows sida Gudbinta-QT ama UGet ee illaa iyo hadda ii fiicneyd aniga, badanaa ma dhihi karo isla wixii ku saabsan codsiyada kale ee lahaanshaha ee si tartiib tartiib ah u lumiyay waxqabadkoodii wanaagsanaa. Iyada oo Debian aan helay iftiinka si aan u hadlo, maadaama ay ku guuleysatay inay xalliso baahiyadayda aasaasiga ah (daawashada fiidiyowyada, waxay leeyihiin xawaare layaableh, wax ka beddelka aaladaha kala duwan ee Ardor iyo Mixxx ...) Debian oo aan la joogin distoor kale.
Si kastaba ha noqotee, wali waxaan u isticmaalayaa Dualboot sababaha aan horay u soo sheegay, laakiin ma aanan iloobin kalasoociddii Debian gebi ahaanba. Waxaan rajeynayaa inaad u tagi doontid halyeeyada halyeeyga ah sida Debian iyo RHEL / CentOS halkii aad ku quusin lahayd xaquuqda kale oo aad ku lumi lahayd wadada.
Waxaa jira wax maskax ahaan igu dhibaya qoraalkaaga. Sideen ugu talin karaa distro jir inuu qof ka yimaado Windows? Waxaan jeclaan lahaa in aan awoodo in aan kula taliyo Debian aabahay, laakiin isagu ma jecla in uu sameeyo dib u dhacyo fara badan si uu u sameeyo waxyaalaha yar ee uu doonayo in uu ku sameeyo mashiinkiisa (waxyaabo uu si fiican ugu qaban karo Linux sida isticmaalka libreoffice, daawashada filimada VLC ). Iminka linka kaliya ee uu adeegsado waa taleefankiisa gacanta ee android.
Sida aan u jeedo. Tijaabada Debian waxay i siisaa wax kasta oo aan u baahanahay, waxaana cadeynta ugu fiican ee tani ay tahay inaan ka badbaaday sii deyntiisa ka dibna tahriibkii oo dhan min side ilaa baaritaanka. Laga soo bilaabo Janaayo, waxaan kaliya u isticmaalaa Windows kumbuyuutarka kumbuyuutarka fog (sababo shaqo awgood), laakiin kuma isticmaalo mishiinkeyga.
Waan ka xumahay, iska ilow miraha. Ubuntu iyo Mint waa faracii Debian. Fedora oo ka socda Red Hat iyo OpenSuSe oo ka socda Suse Linnux. Ma ogtahay inaadan xasuusan hadii Suse uu ku dhashay madaxbanaan iyo inkale?
Mint waa nooca dhalaalaya ee Ubuntu, iyo xaqiiqda ah inay sii deysay nooc si gaar ah ugu saleysan Tijaabada Debian ayaa ka dhigeysa inay u sii dhaqaaqdo mabaadi'da bilowga ah ee Ubuntu (ixtiraamka isticmaaleha barnaamijka bilaashka ah iyo tan lahaanshaha).
Waqtigaan la joogo, Slackware ma haysto fargeeto hufan oo uu ku matalo, laakiin waa dhowaan.
Salaan diazepan !!!. Ku rakibida Wheezy ficil ahaan waa soo socota -> xiga. Waxaan kula talinayaa qof walba. Ama haddii kale, ku tali aabbahaa Ubuntu, in kasta oo dhaleecayn kasta oo dhawaanahan la soo jeedinayey, haddana weli yahay Software Bilaash ah. Hagaag, intaan ogahay. Ama Fedora ama OpenSuse. Waxaan ku siinayaa afar ikhtiyaar oo bilow ah waxba intaa ka badan. Ubuntu waxay jabisay gaar ahaanta Windows iyadoo horay loogu sii rakibay qalab kala duwan. Nidaamka 76 waa tusaale.
Waad ku mahadsantahay jawaabaha. Mar dambe kuma caajisey.
Saaxiib, waligaa ma caajisid Way iska soo horjeeddaa. 🙂
Haddii aad rabto inaad ka fogaato dhibaatooyinka xirmada, waxaan kuu soo jeedinayaa inaad isticmaasho Debian Stable. Way xasiloon tahay waana ka kalsooni badan tahay noocyada kale, inkasta oo dhibaatada noocyada Iceweasel lagu xallin karo iyadoo la fiirinayo mozilla.debian.net.
Waxaan kuu sheegayaa inaan ahay mulkiilaha hada ee nidaam 76 laptop ah oo horay loogu sii rakibay Ubuntu, kaas oo markii aan ka furay sanduuqa waxa ugu horeeya ee aan sameeyay ay ahayd ka saarista Ubuntu iyo Mount Arch Linux
Way kuu fiicantahay adiga oo doorbidaya distro leh waxqabad ka fiican kan Ubuntu.
@diazepan haddii aad dhigto (tusaale ahaan) Debian deggan oo aad adigu rakibtay, oo ay la socdaan dhammaan codsiyada iyo qaabeynta uu ugu baahan yahay inuu ku habboonaado, wuxuu helayaa aragti wanaagsan, markaa waxaad kaliya sharraxeysaa sida loo rakibo oo loo tirtiro waxyaabaha qaarkood. Ha ku qasbin inuu barto waxyaabaha ka dhigi kara inuu joojiyo isticmaalkiisa (sida rakibaadda oo dhan).
Qofka ka yimaada Windows-ka ee doonaya inuu raaxeysto, waxaa fiican inuu qof kale rakibo Linux oo uu wax baro, maahan inuu isagu isagu sameeyo, si kastoo ay u fududahayba.
hehehe post weyn, waxay kadhigeysaa akhriska mid fudud oo aad ucusub, farxadna u ah indhahayga. Markii aan qoray "Jahwareerka awoodda la doorto", waxaan doonayay inaan muujiyo walaaca ka baxsan xulashada caadiga ah, maaddaama tani ay tahay blog-ka Linux, waxay ahayd mid duufsan in la sameeyo isbarbardhig ka dhan ah mid ka mid ah "dhibaatooyinka" ugu weyn / "barako" ee tan cajiibka ah ee SO.
Sidii aan horayba ugu dooday mar labaadna aan u idhaahdo, iskama indha tiri karno sida ay doorashadu noogu badan tahay, marar badanna waxay naga dhigayaan kuwo xun haddii aan khalad sameyno, si sax ah maxaa yeelay ma jiro xulasho khalad. Waxaan xasuustaa isbarbardhig weyn oo ku saabsan dejinta qiimaha, dhinaca dukaamada silsiladaha marka lagu daro qiimaha caadiga ah ee TV-yada, tusaale ahaan, waxay midba ku dhejiyeen qiime aad u sarreeya, taas oo ujeeddada keliya ee jahwareerka, iibsadaha caadiga ah isagoo og inaadan waligaa awoodi doonin inaad iibsato TV sidaas oo kale ah, waxaad ku iibsaneysaa mid ka qiimo jaban, laakiin wali ka sareeya wixii aad markii hore ugu talagashay. Dhibaatada xorriyadda iyo doorashooyinka marwalba way adag tahay; Aniga, sida inbadan oo idinka mid ah, waxaan ku faraxsanahay inaan haysto ikhtiyaarro, laakiin laga yaabee inaysan run ahayn, inay tahay wax la yaab leh in qaar badan oo ka mid ah shaqooyinkani ay is dhammaystiraan. Waan ogahay mashaariicda dib-u-dhiska, ee ka dhasha natiijo ka dhalatay is-faham la'aanta ka jirta horumariyaha, ama xaqiiqda ah abuuristooda maxaa yeelay markaa iska dhaaf iyaga, oo aan uga tago xirmo cusub, taageerayaal aan faraxsaneyn, ... si kastaba ha noqotee.
Caqliga saliimka ah qaar baa u maleynaya 😉
Salaan iyo Salaan dannlinx !!!. Aad baad ugu mahadsantahay faallooyinkaaga.
Waxay ila tahay in Debian uu ku qancay adiga markii aad joojisay ku ciyaarista kombuyuutarka.
Waxa jira ikhtiyaarro aad iyo aad u badan oo lagu heli karo heer la mid ah kan adduunka gaarka loo leeyahay oo ka dhigaya u guuritaanka Linux suurto gal. Way fududaan kartaa qofka kahor Generation X inuu badalo asaga oo siinaya ikhtiyaarada Xafiiska iyo daalacashada wanaagsan, laakiin kuwa Generation X halkan jooga, ee ah cayaartoy, ama kuwa si buuxda ugu heelan naqshadeynta garaafyada xirfadeed, wali wey heystaan adag tahay in si buuxda loo dhaqaaqo.
Waxaan ka imid Gen Y, laakiin waxaan dareemayaa sida Gen Z (ama iGeneration).
Codsiyo badan, berrinka naqshadeynta garaafka, aaladaha xaaladaha qaarkood badanaa waa kuwo cakiran, laakiin lahaanshaha fikradaha aasaasiga ah sida qabashada stylus si loogu sawiro kaliya vectors-ka Inkscape, waa in ka badan intaas.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, waa ikhtiyaar wanaagsan in la baro barnaamijyada naqshadeynta garaafka oo bilaash ah si looga fogaado inay ku tiirsanaadaan barnaamijyada lahaanshaha. Hadda, waxaan rajeynayaa in Inkscape uu qaatay heerka PANTONE ee daabacaadda (xitaa uusan dhiman Adobe sii deyn doono heerarkooda midab).
Maqaal aad u wanaagsan 🙂
Marka la eego xulashada qaybinta, shaqsiyan marwalba aniga waxay ila ahayd in waxa ugu muhiimsani ay yihiin sida baakadaha loo maamulo loona abuuro, waa waxa "shakhsiyan" siiya "distro base" cayiman.
Dareenkan, waaya-aragnimadii ugu fiicneyd ee aan ku soo qaatay archlinux iyo chakra oo leh pacman iyo PKGBUILD 🙂
Nasiib wanaagse weli waxaa jira dad sida Fico ah, oo maqaalkan wanaagsan ku xusuusinaya qaar badan oo ka mid ah waxa, sida iska cad, mararka qaarkood la ilaaway. Waxa kale oo aan ka tirsanahay isla kooxdii halyeeyga ahayd ee aan dookh lahayn; Kiiskeyga, waxaan ku bilaabay 1987 Olivetti M10 oo aan 100% IBM la jaan qaadi karin waxayna ka dhib badneyd xalka in lala shaqeeyo, kadib waxaan dhex maray wax walba oo muuqday: IBM XT, AT, 386, iwm. ilaa aan ka gaadhayno waxa aan maanta haysanno. Xilligan la joogo iyo muddo dheerba, waxaan isticmaalaa Kubuntu, oo sida caajiska wanaagsan ah, ii farxad gelinaysa waxaanan kula talinayaa kuwa doorbida raaxada ee aan jeclayn inay ku dhegaan qunsuliyadda. Nasiib darrose waa inaan haystaa multiboot (oo leh XP iyo 7), maadaama ay tahay waxa ay macaamiishaydu isticmaalaan oo aanan haysan ikhtiyaar kale, laakiin illaa inta aan ka walwalsanahay, waxaan xaqiiqdii aaday dhinaca mugdiga, waxay ahayd doorasho miyir qab ah oo aan ahay in ka badan ku faraxsan.
Subax wanaagsan dhamaantiin. Waxaan leeyahay saaxiib aniga iga weyn, oo ah Naqshadeeye aad u weyn. Wuxuu ii sheegaa - iyo sabab macquul ah - in qoyska Premiere uusan lahayn wax u dhigma, iyo inuu ku dhashay Apple. Isla sidaas ayaa loo sameeyaa barnaamijka 'Autodesk'. Iyagu waa sannado badan oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan naqshadeynta garaafka; naqshadeynta caawinta ama CAD; farsamaynta fiidiyowga, iwm. Wuxuu ii sheegay in barnaamijka GIMP uu yahay mid hagaagsan iyo in Isukeenistayaashu ay si fiican u shaqeynayaan. Waxaan u maleynayaa in si tartiib tartiib ah aan u awoodi doonno inaan aragno codsiyada sida BrisCAD -It waa Private- adduunka Linux. Waxaan u maleynayaa inay ugu dambeyntii noqon doonto go'aanka saarayaasha.
Hadda, ha la murmin kuwa adeegsada Burcad-badeedda 'Premiere' ama 'Autodesk', oo si deg deg ah u dalbo wax soosaarka Bilaashka ah ee la midka ah.
Waxyaabaha ugu murugsan ee ku saabsan kiiska ayaa ah in inta badan kuwa adeegsada softiweerkan mulkiileyaasha ah ee la afduubay aysan ka faa'iideysan xitaa 5% ka mid ah karaankooda oo ay in badan uga filnaan lahaayeen Gimp ama barnaamij kale oo bilaash ah, laakiin maya, inay noqdaan super-mega -Designer -ultra waa inuu lahaadaa nooca ugu dambeeya ee Adobe lagu rakibay; Ma dhahayo waa kiiska saaxiibkaa, laakiin nasiib daro waa arrinta kiisaska inta badan adeegsadayaasha ...
Dhowr sano ka hor waxaan qoray qoraal ku saabsan qaabka ugu dambeeyay ee moodada. Daqiiqad kasta mar kale ayaan sameyn doonaa, anigoon rabin inaan ka xumaado kuwa ka cabanaya "versionitis" gabi ahaanba :-). 1000% waa kugu raacsanahay, Charlie-Brown !!!.
Hagaag, kiiskeyga, si dirqi ah ayaan u hayaa daalacashada iyo wixii la mid ah sida Flash player. Sidoo kale, wali waxaan haystaa Adobe's CS4 Suite, oo siiya xorriyad dheeri ah oo aan ku dalban karo qalabka. Sikastaba xaalku ha ahaadee, ma arkin wax isbadal ah oo ku yimid qalabkaaga tan iyo markii aan wax ka bartay barnaamijyadaadii dhamaadkii 90-maadkii.
Mana aha kiiska saaxiibkay. Odaygaasi wuxuu adeegsanayaa qaabab duug ah oo xasilloon oo uu durbaba qalbigiisa ku ogaa. Oo sidee buu ugu fiican yahay waxa uu leeyahay! 🙂
HAHAHA ... markaa waxay u muuqataa in adeegsiga noocyadii hore ee horey loo tijaabiyay ay astaan ​​u tahay "duqowdii" ee ku sharadday amniga halkii uu ka ahaan lahaa "cibaaro"; Ha walwelina, qor maqaalkaaga "versionitis", oo in kastoo ay qaar dalooli karto, haddana hubaal inay dhammaanteen wax ku biirin doonto ...
Qaar badan oo ka mid ah qalabka naqshadeynta garaafka ayaa wax yar ka duwan midba midka kale marka loo eego qaabka ay u shaqeeyaan, laakiin marka la eego isbeddelka dhabta ah ee ku dhaca nooc kasta oo barnaamij kasta ah sida CorelDraw, badanaa waxaa ugu wacan kordhinta qaab-dhismeedka iyo qalabka caawinta. Marka lagu daro wejiga marka la eego isdhexgalka sida ay tahay kiiska dhammaan Adobe Suite markii uu yimid CS4, ugu dambeyntii waxaa suurtagal noqotay in la badbaadiyo isku xirnaanta goobta qalabka, marka lagu daro in la kala dooran karo inta udhaxeysa leeyahay.
Marka la soo koobo, waxa ugu muhiimsan maahan aaladda lafteeda, laakiin waa sida loo ogaado sida loo isticmaalo.
Eraygiisa waa cabirka Master Valdes, ma jiraan wax run ka badan waxa aad ku qortay bogga. Hadda waxaan haystay aragtidayda labaad ee laptop-ka ah, waxay ka timid warshaddii iyada oo leh 1 giaga wan oo xusuus ah aad ayey u gaabisey, illaa istaagidda wadaha waxaan ka helay muuqaal muuqaal ah sp1 iyo voila! uma aheyn sida ugu dhakhsaha badan xp, laakiin waxay ahayd mid liqi kara, mana habaarin biil iyo isugeyntiisa waxbadan. Waqtigan xaadirka ah waxaan hayaa wiish aan ka keenay warshadda, laakiin leh 2 gig oo wan weyn waana dhakhso oo wax dhibaato iima siin, laakiin weli xusuus badan ayey liqdaa.
Waxaan haystaa luuqado badan oo kala ah Vista SP2, waxaanan kaliya ogaanayaa farqiga udhaxeeya Windows 7. Xaaladaha oo dhan, Windowsku wuu ku xun yahay cunista kheyraadka, laakiin way ka fiican tahay taageerida OSX oo aan xasilloonayn iyada oo adeegsigeeda Aqua interface uu cuno laba jibbaar inta Windows Aero, iyo weliba, waxay u burburtaa si ka badan sidii hore Windows GUIs.
Waad ku mahadsantahay qiimeyntaada !!!
Si aan degganeyn oo bil gudaheed ay igu kor sudhay hal mar oo keliya, mahadsanid waqtiga degdegga ah ee XDDDDDD
Bitch Fadlan: ku daawo fiidiyowyada YouTube kala duwan Flash Player iyo HD adigoo wata Safari ama Firefox. Aan aragno sida isdhexgalka uga jawaabayo dhanka kheyraadka.
Hadda, iyadoo leh Windows Vista kombuyuutar loogu talagalay ciyaarta waxay leedahay waxqabad la mid ah Windows 7, maaddaama ay leedahay ugu yaraan dhowr buundo oo processor Intel Core i7 ah oo ay si dhakhso leh ugu shaqeyn karto buuxdhaafka Aero / Basic interface ee ay leedahay .
Firefox-ka Windows-ka, runti waa xanuun ku jira tarbadaha, maadaama ay runtii dareemeyso culeys aad u culus marka la barbar dhigo GNU / Linux. Sikastaba, waxaan isku mid nahay QuickTime.
Bah # Waxaan qirayaa inaan wax dhib ah kala kulmin markii aan fiidiyowga ka ciyaarayo Windows, nooc kasta, barnaamijka Apple ma isticmaalo maxaa yeelay waa wax laga naxo, waxaan doorbidaa inaan isticmaalo koodhadhka ama isla VLC si aan ugu ciyaaro fiidiyowyo, FF (I neceb Chrome) dhibaatada laakiin FB taas oo iga dhigaysa inaan gaabis ku sameeyo cusbooneysiinta 'quudinta' laakiin markii dambe xitaa waxaan bilaabayaa inaan arko dokumentariyada kanaalka Taariikhda oo sida muuqata aan ka sii muuqan kanaalkaas so. oo waxaan tan ku sameeyaa lappie-keyga ugu da'da weyn ee leh Windows 8, nasiib darro ma dhihi karo isla sidaas oo kale oo ku saabsan Linux maaddaama ay ka dhigtay isticmaalka CPU kororka isla markaana si isku mid ah u kululaanaya, sidoo kale waxaan u maleynayaa in halkan ay sidoo kale tahay arrinta darawallada ATI, laakiin haye waa mid ka mid ah sababaha aan u joojiyay isticmaalka Linux-ka desktop-ka.
Waxaan u adeegsadaa VLC in ka badan inaan daawado filimadayda marka loo eego QuickTime, oo aan u adeegsado sidii kiciye si aan wax uga beddelo Ka dib Saamaynta iyo Premiere CS4.
Apple waxba ma tareyso markay timaado abuurista codsiyada Windows, taasi waa sababta aan u joojiyo cusbooneysiintooda maxaa yeelay waxay runtii u qalmaan in la joojiyo oo Adobe waa inuu adeegsadaa VLC halkii uu ka isticmaali lahaa QuickTime.
Elio waan kugu raacsanahay adiga, Apple ... sifiican uma dhihi doono maxaa yeelay saaxiibkey pandev wuu xanaaqi karaa hahahaha, laakiin aniga oo doorbidaya qaabka .mov waxaan dhihi karaa markii aan duubo fiidiyowga xaflad aniga iyo iPhonekeyga oo leh galaxy Ace sababtoo ah iPhone-ka wuxuu lahaa tayo ka fiican midda codka iyo muuqaalka labadaba, waxaan u maleynayaa in tani ay sidoo kale sabab u tahay tayada aaladda oo ah Ace, si kasta oo ay tahay waa waxa kaliya ee ka socda Apple ee aan isticmaalo runtiina waxa kaliya ee ay tahay inay naftooda u huraan, si ay u soosaaraan taleefannada hahahahaha, waa la isku khilaafey arrintan waa in haddii aysan JAILBREAK ahayn ma haysto iyaga iyo waxa iTunes ah ... nacalad cusbooneysiintooda ayaa aad u weyn inay runtii caajis baan ahay inaad soo dejiso, waxaan tebayaa waqtiga ay la jaan qaadi karto Winamp.
Sidoo kale, ma isticmaalo NVIDIA ama qalabka ATI / AMD, maadaama aan waayo-aragnimo xun u yeeshay in kaarkayga ATI Raedon ee video ka gubto anigoo ku rakiban Windows, markaa waxaan doorbiday isticmaalka Intel (NVIDIA waa qaali oo kubad ma siiso) GNU / Linux, iyo halkii laga siin lahaa qalabka bulshada GNU / Linux sida dad badani u maleeyeen markii NVIDIA ay heshay Intel, waa la xiray inbadan waana nasiib daro waa wax aan la maqal).
Intel waligiis ma iibsan NVidia man… .. laakiin hadii sawiradaadu gubteen waa sababta… hmm hagaajisey Motherboard-kaaga ma Intelbaa sax ah? Waxaan ula jeedaa dhamaan MOBO, kaliya uma jeedo Chipset-ka, runtiina waxay tahay Intel MOBOs waa karaahiyo, waxaan arkay boqol jeer oo xusuus ah iyo GPU la shiilay mahadsanidiin MOBO-yadaas, taasi waa sababta aanan ugu talinayn iyaga, sidoo kale hadday cadaw ka xun yihiin LOL.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, waa waxa noloshayda khalkhal galiyay, maxaa yeelay lappie-kayga hore wuxuu lahaa NVidia GPU darawalkiisana Linux aad ayuu u fiicnaa, waligey dhibaato iima siin, oo aanan ka dhihi karin ATI, wax yar ma siiyaan Muhiimadda ay u leedahay Linux oo si fiican waxaan u maleynayaa in taasi ay tahay sababta ay wax ugu xumaadeen labiskan xaadirka ah ee hadda jira seddex sano.
Way fiicantahay inaad naftaada uhesho iPod Touch maaddaama ay aad uga jaban tahay oo tayada fiidiyowga ay u fiican tahay sida iPhone-ka.
Sikastaba, waxaan hayaa midkeyga Android-ka ah iyo Winamp oo la rakibay, waa barnaamij aad u cajaa'ib badan marka ay timaado isku duubnida heesaha, marka lagu daro SHOUTcast ee aan ku leeyahay saldhigyada aan jeclahay (waa ka xumahay in nooca Android uusan taageerin AAC, waa horeyba waa sidaas sidaan u dhageystay idaacadaheyga sida Radio Insomnio oo ku jira qaabkaas socodka, marka lagu daro wey ka fududdahay MP3 tayaduna waa sidaas oo kale).
Kombuyuutarrada aan ku isticmaalay kaarkaas fiidiyowga wuxuu ahaa Elitegroup, oo ka wanaagsan Intel laftiisa. Haatan, waxaan hayaa xarun kumbuyuutar oo loo yaqaan 'HP Compaq DC7700' oo la shaqeysa oo si fiican ula shaqeysa Vista iyo Debian Wheezy (xitaa Lenovo waxay la socotaa taxaneheeda 'ThinkCentre' iyo 'ThinkPad' iyo 'HP' waxay ka dhigaan kumbuyuutar ka fiican kan Intel laftiisa, si aan u noqdo qof daacad ah).
Pfff ayaa ah in runta ay tahay in Intel uusan garaneyn sida loo sameeyo Motherboard-yada ilaa iyo hadda, laakiin ma aqaano, waqtiyadaan ma jiro wax magac ah oo sameysmaya agab u gaar ah, xitaa isla (cr) Apple, maxaa yeelay waan ogahay inay jiraan kombuyuutarro HP ah leh MOBOs, MSI ama Asus, xitaa waxaan xasuustaa markii aan iibsaday gubaygeygii ugu horreeyay inay ahayd HP (10x10x32x) markaan gudaha ka furayna waxay wada ahaayeen Sony hahaha weli waxaan hayaa jiifa.
Marka laga hadlayo iPod ... neeeh haddii aan iibsado iPod waxay noqon kartaa nano in loo isticmaalo sida smartwatch wax kale, waxaan ku xasilanahay "ayfons" mana u xiisi doono Android maxaa yeelay waxaan ku hayaa kiniinka hehehehehe, laakiin aad iyo aad ayaan u jeclahay HTC One.
@Cocolio: Midka ku garaacaya Intel samaynta boodhadhka ugu xun waa Foxconn, oo xitaa aanan kudayan karin Slackware adoo adeegsanaya VirtualBox on Windows (ilaa uu ka dhigayo Windows 7 inuu u egyahay Windows Vista).
Hahaha taasi way kacday, waa hagaag taasi waa sababta aan u door bidayo inaan kun jeer oo lacag ka badan ku bixiyo qalabka wanaagsan, waxaan kuu sheegayaa maxaa yeelay sanado ka hor tan iyo markii aan iibsaday kaarka DFI NFII ee leh Athlon XP 2800 + oo leh 2 gig oo RAM ah, AGP NVidia (aniga maahan Waan ku raacsanahay jab) 128 Mb oo wali sifiican ayey u shaqeysaa, mishiinka hada la joogo wuxuu la socdaa Windows 7 SP1 32 jajab cad, wuuna sii wadaa cabirka, casriyeyntii ugu dambeysay ee aan siiyay waxay aheyd 2006, dabcan mar hore ayaa la badalay i7 920 oo 12 ah oo RAM ah iyo NVidia GT 220 GPU iyo MOBO Asus P6t, haddii ay wax badan igu kalliftay laakiin ay socotay waqtigan oo dhan iyada oo aan wax dhibaato ah la siinin, markaa waxaa ugu wanaagsan in waxoogaa lacag ka badan lagu bixiyo wax qiimo leh .
In muddo ah bay ahayd markii aan akhriyay wax aan aad ugu oggolaaday. Waan fahamsanahay in kuwa hadda ka bilaabaya adduunka Linux ay noqon karto jahwareer, laakiin wax kasta oo cusub ayaa wareersan! Aniguba waxaan kasoo jeedaa jiilka DOS waxaan xasuustaa markaan bilaabay isticmaalka daaqadaha 3.1, waxay umuuqatay… wareer. Cabashada ku saabsan suurtagalnimada doorashada ... .. kaliya waxay nagu dhici kartaa annaga linuxers. Sidaan ku dhahno Argentina "ka caban wax buuxa"
Jawaab Rodrigo Prieto
Mar labaad waad ku mahadsan tihiin dhammaan wixii ra'yi ah
Waxaan u maleynayaa inay lama huraan tahay in la kiciyo codadka dhamaanba OldFashion 'Linuxeros' faa iidada kuwa cusub. Dhaxalkayaga sidaa darteed, gadaal dambe, nama ay tilmaamayaan inaan nahay qallooc ama danayste. Mid walbana sida ku cad khibradiisa uu u shubo si Xushmad iyo cabsi la'aan ah.
Markii aan bilaabay GNU / Linux, waxaan kaliya ka ogaa Red Hat iyo Slackware. Distoorkeygii ugu horreeyay wuxuu ahaa Mandrake 9, oo markii hore fiicnaa laakiin gaabis ahaa xirmooyinka. Kadib waxaan usii raacay Debian Lenny, taas oo aniga igu qancisay waxaanan ku cusboonaysiiyay kaliya DVD1 nooc kasta ah, runtiina waxbadan ayey kasii fiicnaatay marka loo eego Windows (waxaad dhigaysaa DVD1, waxaad sugeysaa inay aqoonsato diskiga, waad qortaa «Apt-get update» iyo "apt-get upgrade" iyo voila: Debian waa la cusboonaysiiyay).
Hahaha waxaan ku bilaabay Mandrake si kastaba ha noqotee.
Qoraal aad u wanaagsan, hambalyo.
UY, waxaan ka imanayaa wakhtigaas, waxaan ku bilaabay kombuyuutarradii dib 1992.
Mashiinkaygii ugu horreeyay wuxuu ahaa 286 oo leh 16 Mb oo RAM ah iyo 52 Mb Hard Drive, oo leh 512 Mb ISA kaarka fiidiyaha:
Waxaan xasuustaa W 3.0, waxay umuuqatay basophy marka loo eego Classics-ka aadka u yar ee Macintoch Classics.
Xarfaha W 3.0 waxay umuuqdeen wax laga naxo, ma jirin WYSIWYG waana inaad ka fikirtaa sida xarfaha loo daabacayo.
Iyadoo 3.1 ay la yimaadeen xarfaha TTF wax walbana waa is beddeleen.
Uma sii wadi doono ka sheekeynta waxyaabihii igu soo kordhay ee ku saabsan Windows, waxaad horeyba u sameysay wax ka badan sidii hore laakiin waxaan ku dari doonaa, in waqtigaas wadankeyga uusan ka jirin internetka, waxa ugu dhow ayaa ahaa BBS (oo kaliya xusuusta aad u weyn odayga waxaan ku xirnay adeegsiga modemyada iyo khadka taleefanka, dhammaantood qaab qoraal ah.
Waqtiga ka mid ah waxaan naftayda u hibeeyay Adeegga Farsamada ee mashiinnada Windows-ka (3.1, 95, 98, ME, XP), anigoo u shaqeynaya dadka tixgeliya Windows AAD U DARAN waana sababtaas inay u siiyaan Farsamayaqaannada. Tan waxaa loogu talo galay kuwa dhaha Windows-ka wuu fududaa Linux-na wuu ku adag yahay. WELIGI ma isticmaalin ama ma rakibin noocyada XP ka dib, halkaas ayaan u degay oo WALIGE ma rabin inaan ku noqdo deegaannadaas, marka laga reebo mashiinnada dadka kale.
Arimihii ugu horreeyay ee jacayl ee aan la leeyahay Linux waxay ku noqdeen SuSE 6.3, oo aan iibsaday sanduuq, oo leh 6 CD iyo buugag.
Kadib waxaan soo maray Debian Potato, Mandrake, Knoppix, ilaa Ubuntu soo baxday, laakiin waligay Ubuntu ma isticmaalin, markii aan tagayay laantaas, waxay tagtay Kubuntu, maxaa yeelay markasta waan jeclaa KDE.
Qeybinta ugu horeysa ee ii ogolaatay inaan ku raaxeysto Linux bilowgii, bilaa riwaayado, dhib la'aan, dhib la'aan, qarsoodi la'aan, wuxuu ahaa Linux MINT, marwalba waan ku xasuusan doonaa taas.
Qeybinta ugu weyn waa Kubuntu, waxaan bartay inaan qaabeeyo oo aan ka faa'iideysto.
Waxaan hayaa Printer, oo AAN waligiis u guurin Linux, sababtoo ah WAAN KU DHASHAY LINUX iyo Software Bilaash ah oo aan waligood diskigiisa kujiro waxaa jiray xog yar oo kusaabsan Windows iyo Software xiran iyo kuwa gaarka loo leeyahay.
Mashiinadayda MY iyo waxyaabahayga waxaan si gaar ah ugu isticmaalaa softiweer bilaash ah hoostiisa Linux, mana ku bixiyo inaan isku dayo waxkasta oo ka mid ah noocyada cusub ee Windows, si fudud maxaa yeelay ANIGU MA DANAYNAYO, waxba iguma siyaadiyaan sidaas darteedna waxay yihiin ANTI-DHAQAALAHA iyo TALO-SOO-SAARKA, maxaa yeelay waxay mashquulinayaan Waqtiga waa inaan barto isticmaalka Software-ka Bilaashka ah, sikastoo aan rabo, meesha aan rabo, goorta aan doonayo iyo waxa aan rabo, 1 ama 1000 mashiin oo had iyo jeer si DAACAD AH, XIRFAD LEH iyo 100% habka SHARCIYADA.
Waxyaabaha ku saabsan noocyada kala duwan iyo / ama qeybinta Linux, xitaa waxaan go'aansaday inaan isku duba rido naqshadaha Sawirada iyo Madbacadaha loo yaqaan Kubuntu 13.04 DiGra.
Waxaad ka arki kartaa macluumaad ku saabsan halkan:
Wax intaas dhaafsiisan, salaan iyo waan aqrinaa.
Ujawaab Daniel Bertúa
Su'aal: GIMP miyaad ku isticmaashaa Krita iyo Scribus ama Inkscape? Tan iyo markii loo yaqaan 'GIMP', qalabyadu si xoog leh ayey u jahwareersan yihiin si dib loogu hagaajiyo sawirrada (oo leh Scribus iyo Inkscape wax dhibaato ah kuma qabin la qabsashadooda).
Elio fiiri boggiisa, runta ayaa ah inaan iskudayay inaan soo dejiyo hehehehe
Waxaan horeyba u ogaaday, maxaa yeelay waxaan ku badbaadiyey togga qaybtayda Windows Vista si aan hadhow ugu soo dejisto Debian Wheezy aniga oo leh dhammaan nabadda maskaxda adduunka (in kasta oo ay igu filan tahay inaan haysto GIMP oo aan gacanta ku hayo Inkscape iyo Scribus, laakiin weli waxaan u baahanahay inaan rakibo Jashaka iyo AVIDEMUX loogu talagalay tafatirka fiidiyowga).
Haa, waxaan ku isticmaalaa Chromium Windows-ka maxaa yeelay Google Chrome wuxuu noqday mid aan loo dulqaadan karin Pepper Flash, qalabkiisa daabacaadda daabacaadda PDF / akhriska iyo Google Update oo gaabiya Windows-kayga.
Waxaan u isticmaalaa GIMP, KRITA ku dhowaad waxba, waxaan u isticmaali jiray inaan ugu beddelo sawirada CMYK, illaa aan ka gartay in SCRIBUS sameyn karo markii la dhoofinayo "PDF for Printer", taasoo awood u siinaysa burburka CMYK ee dukumintiga oo dhan, marka lagu daro midabada barta haddii loo baahdo.
Waxa ugu badan ee aan ku isticmaalo madbacadda daabacaaddayda, si aan caadi ahayn, waa Libre Office DRAW, in kasta oo ay iska caddahay waxyaabaha toosan iyo kuwa fudud (waraaqaha, kaararka, xaashiyaha, waraaqaha cod-bixinta, rasiidhada, iwm), maxaa yeelay waa mid aad u dhakhso badan oo dhinacyo badan leh.
SCRIBUS waxyaabo adag oo u baahan burburka midabka, qoraal fara badan, iwm.
KU DHAQAN waxa ka mid ah sawirada, qaababka, astaamaha, saamaynta kakan ee hooska, tilmaamaha, iwm.
Isticmaalkayga GIMP waa mid aasaasi ah, abuurka, wax ka beddelka dhalaalka, isbarbardhiga, iwm. iyo wax kale oo aad u yar.
BLOG-ka ama kooxda Facebook-ga waxaa ku jira muunado ka mid ah shaqooyinka 'CONCRETE' iyo 'REAL', ma ahan kaliya aragti, taas oo si fiican u tusaaleyn karta adeegsiga aan siiyo mid ka mid ah barnaamijyada.
Inkscape iyo Scribus waxay umuuqdaan kuwa ugufiican ee bedelaya CorelDraw iyo InDesign. Sidoo kale, weligay kuma fikirin in Krita runti la mid tahay Adobe Illustrator iyada oo ay ugu wacan tahay amarka qalabkeeda. GIMP waxaa ka maqan sifaynta qalabka si ay ugu fududaato in la maareeyo.
Sikastaba, in aad naqshado wanaagsan ku sameysan karto softiweer bilaash ah, waad awoodi kartaa.
Faallo aad u wanaagsan, saaxiib Daniel Bertúa !!! Dadka adiga oo kale ah ayaa adduunka Linux ka dhigaya wax weyn.
Kulligeen waxaan ka baranaynaa qof walba.
Waxaan DHAMMAAN ku weyneeynaa CAALAMKA Linux iyo Software-ka Bilaashka ah, wixii aan awoodno iyo waxa ku soo gaara awoodeena.
Waa quruxda tan.
Wixii aad qortay aniga ayaa i dhaqaajinaya, waxay umuuqataa cashar nololeed in ka badan mowduuc saynis kombuyuutar haha
Waad ku mahadsantahay faalladaada !!!. Xog-ogaalnimada, abuuritaanka Aadanaha, WAA qayb nolosha kamid ah mana jiri doonaan marka laga reebo, ugu yaraan sidaan ognahay.
TuxInfo # 59 majaladda la heli karo
Dayactirka Nidaamka: HowTo chroot